4 arimood oo aad isaga ilaalin karto cudurada galmada laga qaado | Raganimo University
4 arimood oo aad isaga ilaalin karto cudurada galmada laga qaado
June 3, 20192 minutes
Sida la wada ogyahay cuduro badan ayaa laga qaadi karaa galmada oo loo yaqaan STD. Cuduradaan waa badanyihiin oo waxaa ugu caansan HIV/AIDS iyo cagaarshowga. Dadka qof walba waxbaa u qarxoon balse waxaa muhiim ah in la taxadaro oo rag iyo dumar mid ba kan kale waa qabadsiin karaa cudurka.
Baaritaan joogto ah
In aad caafimaadkaaga si joogto ah u baarto waa mid adiga iyo xaaskaaga ama seygaaga u wanaagsan. Cudurada galmada waxaa la isaga ilaalin karaa in aad si joogto ah isku baadho oo aad la socoto xaaladaada caafimaad. Waxaad iska qaadi kartaa dhiigag. Qaasatan haddii aad qurbaha ku nooshahay waxay u badantahay in baaritaanka uu bilaash yahay. Waxaa sidoo kale heli kartaa talaalka cagaarshowga.
Cinjirka galmada (kondom) ayaa lagu sheegaa in uu yahay waxyaabaha ugu wanaagsan ee la isaga ilaalin karo cudurada galmada. Isagoo faa'idadiisa ay ku jidho iska ilaalinta uurka. Inkastoo uusan 100% cudurada ilaalin karin balse haddii aad si haboon oo joogto ah u isticmaasho wax kaga haboon ma yaalaan suuqa. Waliba haddii uu kugu jiro shaki oo aadan wali isbaarin waxaa muhiim ah in aad cinjirka isticmaasho ama aad galmada iska joojiso.
Kala hadal xaaskaaga ama seygaaga baaritaanka
Haddii aad adigu is baadho balse ay xaaskaaga ama uu seygaaga qabo cudurka waxba kuuma siyaadin. Maadaama galmadu ay tahay arin labo qof ka dhaxaysa waxaa muhiim ah in aad sidoo kale wada hadal ka yeelataan arintaan oo haddii aad baaritaan isku samaynayso aad si wada jir ah isugu sameysaan.
Galmada oo aad iska ilaaliso
Tani waa mid iska cad oo haddii aadan cidna u tagin way adagtahay in aad qaato cudurada galmada la isku qabadsiiyo.